प्रकाण्डसँगै गिरफ्तार विमर्शको सनसनीपूर्ण अन्तर्वार्ताः हामीलाई यसरी गर्यो गिरफ्तार::mirmireonline.com
आ. व.: ०७४/०७५ | दर्ता न: १७८/०७३/०७४ | प्रबन्ध निर्देशक: सिर्जना तिम्सिना, सम्पादक: वाशुदेव तिमिल्सना | आइत, भदौ १७, २०७५
कलिकाेटकाे माल्काेटका हरिचन्द्र अाचार्य ‘विमर्श’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता हुन् । उनी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’का सहयोगी साथै चालक समेत हुन् । नेकपा देशमा दलाल संसदीय व्यवस्था खारेज गरेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित राजीतिक आन्दोलनमा छन् । त्यसैले उसले वर्तमान संसदीय व्यवस्थाले आयोजना गरेको स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनावमा खारेजी अभियानै चलायो । नेकपाको नेतृत्वमा विगतका १० वर्षे जनयुद्धका एक प्रखर तथा इमान्दार नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ छन् । त्यसैले धेरैले विप्लव नेकपा भनेर समेत चिन्दछन् । त्यस पार्टीमा जनयुद्धकै थुप्रै सक्षम र इमान्दार नेताहरु छन् । प्रचण्डले जनयुद्धको एजेण्डामाथि गद्दार गरेर क्रान्ति र जनतालाई धोका दिएको भन्दै उनीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी २०७३ फागुनमा रोल्पाको थवाङमा आठौं महाधिवेशन गरेयता हालसम्म चार पटक केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ । गएको साउनको पहिलो साता सम्पन्न चौथो बैठकले अहिले देशको राष्ट्रिता सर्वा्धिक कमजोर र संकटमा परेको निस्कर्ष निकाल्दै त्यसअनुरुप राजनीतिक र रणनीतिक कार्यक्रम तर्जुमा गरेर चार महिने जनजागरण अभियानमा पार्टी जाने निर्णय लियो । त्यसरी पार्टी कामकै सिलसिलामा प्रवक्ता प्रकाण्डलाई गाडीमा लिएर हेटौंडाबाट काठमाडौँ आइरहेको बेला काठमाडौँको फर्पिङ–बल्खु सडकखण्डअन्तर्गत टौदहनजिक चाल्नाखेलबाट गाडीसहित दुईजना नेताकार्यकर्तासहित प्रकाण्डलाई सादा पोशाकका प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो । सोही गिरफ्तारका बेला गाडी चलाउनेमा आचार्य नै थिए । अर्का एकजना चालक मनबहादुर श्रेष्ठ पनि सँगै थिए । श्रेष्ठ बिरामीका कारण गाडी आचार्यले चलाएका थिए । गिरफ्तारपछि तीनैजनालाई करिब पन्ध्र घण्टासम्म बेपत्ता पारेर भोलिपल्ट साढे ९ बजेतिर मात्र महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पुर्याएर सार्वजनिक गरियो । पछि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको सुनुवाईमा सर्वोच्च अदालतले भदौ १ गते तीनै जनालाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दियो । दुईजना रिहा भए तर प्रकाण्डलाई अदालतपरिसरबाटै पुन: गिरफ्तार गर्यो । रिहा भएकामध्ये आचार्यसँग गरिएको कुराकानीको मुख्य अंश– संः
० तपाईलाई गिरफ्तार कहिले र कुन समयमा गरियो ?
गएको साउन २२ गते । अन्दाजी बेलुका साढे ७ बजेतिर गिरफ्तार गरेको हो । गिरफ्तार गर्नेहरुले आपूmलाई सीआईबीका मान्छे भन्थे । तिनीहरुले नै हामीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
० कहाँबाट कसरी गिरफ्तार परियो ?
काठमाडौँको दक्षिणकाली–बल्खुको बाटोमा टौदह नजिकै (जसलाई चाल्नाखेल भनिँदोरहेछ) बाट गिरफ्तामा परियो । गाडी मैले नै चलाएको थिएँ । गाडीमा पछाडिपट्टि सिटमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रवक्ता खड्गबहादुुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ हुनुहुन्थ्यो । अगाडिपट्टि मेरो छेउको सिटमा चालक मनबहादुर श्रेष्ठ थिए । उनी पनि चालक नै हुन् । हामी हेटौंडामा पार्टीको कायर्मक्रम सिध्याएर पार्टी कामकै सिलसिलामा काठमाडौँ आइरहेका थियौं । बल्खुतर्फ आउँदा फर्पिङपछि भेटिने जंगल कटेर केही वर मात्र आइपुगेका थियौं । हाम्रै गाडीलाई केही मान्छेले ताकेता गरेरै रोके । त्यहाँ करिब ३०–३५ जनाको टोली त्यहाँ बसेको थियो । सबैजना सामान्य (सादा) पोशाक थिए । उनीहरुको जत्था ठूलो थियो । टोलीले गाडी अगाडि बढाउन दिएनन् । पछि बुझ्दा हामीलाई रोक्नकै निम्ति त्यो टोली त्यहाँ तैनाथ रहेछ ।
गाडी रोकेपछि टोलीमा रहेकामध्ये एकजनाले हाम्रो गाडीको नम्बर हेरेर ‘यति नम्बरको गाडी यही हो सर’ भने । तत्कालै अर्काबाट नछाड्न आदेश भयो । त्यसपछि अब चाहिं कब्जामा परियो भन्ने पर्यो । एकजना अर्को आएर मलाई गाडी छेऊ (साइड) लगाउन भने । मैले मानिनँ । तपाईहरुको को हो ? के कारणले गाडी रोक्दै हुनुहुन्छ ? प्रश्न गरेँ । तर, हाम्रो कुरा सुन्ने इच्छै उनीहरुमा देखिएन । साइड लगाइयो । त्यसभन्दा अगाडि थुप्रै गाडी बिना रोकटोक गइरहेका थिए । रोकेका थिएनन् । केही मोटरसाइकललाई चाहिं रोकेर त्यसमा सवार मान्छेका अनुहार नियाल्ने र चेकजाँच गरेको देखेँ । तर हाम्रै गाडीलाई ताकेता गरेर रोक्न हातले इसारा निर्देश नै दिए । त्यतिमात्र होइन, गाडीको अगाडिपट्टि आएरै छेके । बढ्नै दिएनन् ।
त्यसपछि टोली नै गाडी छेक्नतिर लागे । गाडी साइड लगाएँ । सिसा खोल भने । एकजनाले गाडीको चाबी मागे । दिइनँ । हामी प्रहरी हौं चिनिनस् ? कढ्किए, चाबी थुते, त्यसपछि अरुले मोवाइल खोसेर गाडी नै कब्जामा लिए । हामी सबैका मोवाइल लिए । घरमा फोन गर्न खोज्दा पनि दिएनन् ।
० त्यसपछि के भयो विस्तृतमा भन्नुस् त ?
कसैले चाबी दे भनेको भरमा दिने कुरा त आउँदैन । सुरुमा त मैले चाबी दिन मानिनँ । तपाई को हो ? बिनाकारण तपाईलाई चावी किन दिने ? भनेर प्रतिप्रश्न गरेँ । तर उसले ‘पुलिस हौं, बढी बोल्ने होइन, खुरुक्क चाबी दे’ भनेर रुखो बोले । अझै कढ्किएर त्यो मान्छेले ‘बढी बोल्छस्’ भनेर धम्की पो दिन थाले । त्यतिन्जेलसम्म गाडीलाई पूरै घेरिसकेको थियो । अन्ततः मैले चाबी दिएँ । हामी तीनै जनालाई सकडमै घेरा हालेर राखे ।
० त्यसपछि के गरे, कहाँ लगियो ?
० गाडीबाहेक साथमा के के सामान थियो ?
त्यस्तो सामान केही थिएन । आ–आफ्नो मोवाइल त थियो नै । मसँग एउटा ल्यापटप थियो । त्यो गाडीसँगै लगिहाले । मोवाइल खोसैरै लियो । पर्स पनि लगे । केहीछिन सकडमै गाडीलाई घेरा हालेर राखेका उनीहरुले हामीमाथि मानसिक रुपमा त्रास दिन थाले । के कति कारणले यसो गरिएको हो भनेर सोध्दा ‘चुप बस’ भने । जवाफै दिइएन । सबैले हामीलाई राताराता आँखा तरेर हेर्थे । पूर्णरुपमा कब्जामा परिएछ भन्ने हामीलाई लाग्यो ।
० त्यहाँबाट कता लगियो, याद छ ?
त्यसपछि फर्काएर केहीबेर हिँडाएर नजिकैको प्रहरी चौकीमा पुर्याए । चौकीमा लगेर १५ मिनेट जति राखियो होला । चौकीमा एकदुई जनामा प्रहरी देखिन्थ्यो । हामीलाई लैजाने टोलीकामध्ये केहीले मोवाइलबाट कोहीसँग कुरा गरे । हामीलाई समातेको कुरा रिपोर्टिङ गरेजस्तो लाग्यो । त्यतिबेलासम्म ती मान्छेहरु केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का रहेछन् भन्ने कुरा हामीलाई बढी नै पर्यो । त्यसको ५÷६ मिनेटमै सर (प्रकाण्ड) र मलाई सेतो रंगको गाडी (प्राइभेट कार)मा पछाडिपट्टिको सिटमा राखेर चोभार–बल्खुतर्फ ल्याइयो । सर र मलाई सिटको बिचमा पारेर दुईतर्फी झ्यालमा एकएक जना ती मान्छे बसे । त्यसरी बस्ने क्रममा तिनीहरुले हाम्रो एकापट्टिको पाखुरालाई जोडसँग अठ्याए । घरिघरि कोखा पारेर जोडले धक्का दिन्थे । गहिरोसँग दुखाएर रिस पोख्न खोजेको भान प्रष्ट हुन्थ्यो । त्यसपछि के हुँदैछ भन्ने पनि संकेत थियो त्यो धक्का । हामीसँगैका ति दुवैजनाले केही सामान राखेजस्तो छुट्टाछुट्टै झोला भिरेका थिए ।
० त्यसपछि कहाँ पुर्याइयो ?
त्यसरी चौकीबाट हामीलाई लिएर गाडी बल्खुतर्फ अगाडि बढ्यो । लाग्छ, हिँडेको २५/३० मिटर पार भएपछि नै मलाई मेरैपट्टि झ्यालमा र सरलाई त्यतैपट्टि झ्यालमा बस्नेले झोलाबाट हत्कडी झिकेर दुवै जनालाई हात अगाडिपट्टि पारेर हत्कडी लगाइदिए । त्यसपछि करिब २ किलोमिटर जति गाडी गुडेपछि तिनैले त्यही झोलबाट एकएकवटा कालो चश्मा निकालेर ‘लौ हजुर यो लाउनुपर्यो भन्दै आँखामा त्यो चश्मा लगाइदिए । गाडी ठीकै गतिमा थियो । चश्माका कारण बाहिरका मान्छे नचिनिने भयो । अनि ३–४ किलोमिटर जति दूरी पार गर्दा फेरि त्यही मान्छेले त्यही झोलाबाट ‘लौ हजुर यो पनि लाउनुपर्यो’ भनेर कालो कपडाको बाक्लो पट्टी कालो चश्मामाथि जोडसँग बाँधिदिए । त्यसपछि बाहिरका दृश्य समेत देखिन छाड्यो । ठाउँ चिनिनै नसकिने भयो । सडक बत्तीको उज्यालो र गाडीको हेडलाइट, आवाज र गाडी मोड्ने दिशाले मात्र अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । त्यसरी हामीलाई क्षणभरै अन्धो बनाइयो ।
० त्यसपछि के भयो थाहा छ ?
० त्यहाँबाट गाडीलाई कता लगियो ?
त्यहाँबाट दाहिने जस्तो लाग्छ, मोडेर गाडीलाई बेगमा कुदायो । त्यसपछि हामी (गाडी)लाई कहाँ लैजान खोज्या हो ? के गर्न लागेको हो ? कारण के हो ? भनेर सरले सोध्नुभो । तर उनीहरु कसैले जवाफ दिएनन् । साउती समेत गरेनन् । अपराधीलाई जसरी किन यस्तो व्यवहार ? भनेर उहाँले प्रतिवाद गर्नुभो । जवाफमा ‘माथिको आदेश हजुर’ मात्र भन्थे । निरीह त उनीहरु पो देखिए । आफुहरुलाई आदेश पालकको दर्जामा मात्र राख्थे । मनबहादुरलाई कहाँ लग्यो पत्तो थिएन । उनलाई हाम्रोबारे पनि त्यही हुँदो हो ।
० कति समय घुमाइयो ?
० कहाँ–कहाँ पुर्याए जस्तो लाग्छ ?
० के उसो भए रातैभर घुमाइयो ?
० त्यसरी कोठाभित्र हुलेपछि के गर्यो ?
ढोका खोलेर मलाई अघि भनेको कोठामा लगेर भुँईमा राख्योे । राखेपछि ‘तँैले बस्ने यस्तैमा हो’ भनेर त्यो मान्छे फर्किए । त्यो त अझै धेरै राम्रो भन्थे । कोठामा एउटा पातलो–पातलो खालको डस्ना ओछ्याइएको थियो । त्यहाँ दुईटा जति गन्हाउने सिरक पनि थियो । डस्नामाथि केही ओछ्याइएको थिएन । कोठा सानो र बहुतै दुर्गन्धित । दुर्गन्धको हिसाबले त्यो कोठा लामो समय प्रयोगमा नल्याएको र ढुसीको गन्ध आउँथ्यो । मलाई त्यही कोठामा बसाएर त्यो मान्छे फर्किए । डस्नामाथि मोजा नखोलेरै बसेँ ।
० त्यस्तैमा रात बित्यो कि ?
० यातना कुन हदसम्म रह्यो ?
० करेन्ट पनि लगाए ?
० त्यसपछि के भयो ?
० यातना कति समयजति चल्यो ?
करिब बिहान साढे ३ बजेतिर मात्र यातना रोकियो । करिब पाँच घण्टा जति चल्यो । अन्तिममा अढाई बजेतिर आएको टोलीले भने अर्को रुपबाट प्रस्तुत भयो । त्यसले बढीजसो राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक कोणबाट प्रश्न गर्ने, कुराकानी गर्याजस्तो गरे । फरक–फरक टोलीले भिन्नभिन्न मनोविज्ञानबाट केरकार गर्थ्यो ।
अन्तिमको टोलीमा आउनले त ‘तपाईहरु जस्तो क्रान्तिकारीसँग भेट्दा गौरव लाग्छ, खुशीको कुरा हो’ भन्थे । प्रश्न पनि त्यस्तै त्यस्तै खालका हुन्थे । ‘तपाईका नेता विप्लवको विचार, भनाई र राजनीति त हामीलाई मन पर्छ । त्यस्ता मान्छे देशमा चाहिया छ नि, तर के गर्नु सर आपूm त जागिरे परियो । माथिबाट आदेश जे आउँछ त्यही गर्नै हो’ भन्थे । उनीहरुमा माथि अर्थात सरकार (गृह मन्त्रालय)मा बस्नेहरुले जे गर भन्छन्, अह्राउँछन् त्यही गर्ने पात्र हुँ भन्ने भाव सजिलै बुझिन्थ्यो । उनीहरुसँग निरीह भएर माथिको आदेशपालना गर्नुबाहेक विकल्पै छैन भन्ने प्रष्ट झल्किन्थ्यो ।
बिहान ४ बजेतिर मात्र यातना दिन बन्द भयो । त्यसपछि डेढ घण्टाजति बसेकै ठाउँमा ढलेछु । अलिकबेर निदाएछु पनि । सुतेकै अवस्थाबाट याद गरेँ । त्यो कोठाको माथिपट्टि सिलिङ ढलान गरिएको पक्की थियो । वरिपरि वाल (गारो) भित्ता प्लाष्टर गरिएको र रंग उडेर मधुरो भइसकेको अवस्थामा थियो ।
० प्रश्न चाहिं के के सोधिन्थ्यो ?
० यस्तो किन भयो जस्तो लाग्छ ?
सरकार आफैंले बनाएको कानून, आफैंले दिएको अधिकार खोस्ने, राज्यको ढुकुटीमा सरकारमा बस्ने मान्छेहरु, कर्मचारी, कथित निर्वा्चित जनप्रतिनिधि, तिनका आसेपासे–आफन्तहरुले लुट मच्चाउने, नदी–नाला, जमिन विदेशीलाई दलाललाई बेचेर पैसा खाने अनि त्यसविरुद्ध जनचेतना फैलाउने, भण्डाफोर गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीति गर्दै हिँडिरहेको नेकपाका नेता कार्यकर्तामाथि दमन, गिरफ्तार, यातना, झुठा मुद्दा लगाएर ठीक पार्छु भन्ने सरकारको मानसिकताको परिणाम हुन् यी सबै ।
० राज्यले गिरफ्तार नेता, कार्यकर्ताबाट वास्तवमा के चाहन्छ भन्ने केही छनक पाउनुभयो ?
० त्यहाँबाट फिर्ता आइन्छ जस्तो लाग्याथ्यो ?
० त्यसरी यातना दिने ठाउँ कहाँ जस्तो लाग्छ ?
प्लेनको आवाज चाहिं प्रष्टसँग नजिकैजस्तो सुनिन्थ्यो । यसरी हेर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक हुनुपर्छ त्यो ठाउँ । मलाई राखेको कोठादेखि उतापट्टि चाहिं किचेन (भान्सा) जस्तो पनि, भाँडाकुडा पखाल्ने स्पेस जस्तो लाग्थ्यो । आवाज सुन्दा त्यो हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । बेलाबेलामा त्यहाँ पानीको धारा खोलेको र बन्द गरेकोजस्तो लाग्थ्यो । त्यसबाहेक उनीहरु आवातजावतको मात्र सुनिन्थ्यो । म भएको त्यो कोठामा झ्याल थिएन । सिर्फ एउटा ढोका, त्यो पनि सानो साइजको । बिहानीमा त्यो कोठामा उज्यालो आयो । त्यही एक गिलास चिसो पानी र एक पुरिया बिस्कुट (गोलाकारको) ल्याएर दियो । पछि तातो पानी मगाएर हत्कडी र पट्टीमै त्यहीबसेर खाएँ । खाने बेला भित्तापट्टि फर्कन लगायो । खाइसकेपछि जुत्ता लगाउन भने । त्यहाँबाट हत्कडी र पट्टीमै झण्डै २० पाइला हिँडाएर प्राङगणबाट गाडी चढाए । गाडीको कलर खुट्याउन सकिनँ । मलाई चढाएको केही छिनमै एकजनालाई मसँगै चढाए । उनी मनबहादुर नै रहेछन् ।
० त्यहाँबाट कहाँ लगियो ?
० तपाईमाथि आरोप चाहिं के थियो ?
आरोपको कुरा गरेर के साध्य लाग्छ यहाँ । कुनै आरोप यस्तो थियो कि सपनामा देखिँदैन । कल्पना त कुरै छोड्नुस् । म कालिकोटको मान्छे । त्यही भएर होला, माथिल्लो (अप्पर) कर्णली जलविद्युत आयोजना स्थलमा बम हानेको, आयोजनाको ठेकेदार भारतीय कम्पनी जीएमआरको क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतमा बम हानेर आगजनी गरेको जस्ता आधारहीन र कपोलकल्पित अभियोग लगाउन खोजे, प्रश्न गरे । जीएमआर कम्पनीले त्यहाँ सरकारलाई समेत झुक्याएर विद्युत उत्पादनमा राष्ट्र र जनतालाई ठूलो नोक्सान पुर्याउने सम्झौता गरेको कुरा सरकारकै प्रतिवेदनले बोलेको छ, स्थानीयले बोलेका छन्, नेकपाले भनिरहनु पर्दैन । त्यसो भएको हुँदा स्थानीयले आफ्नै देशको लगानीमा निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने सुरुदेखि नै विरोध गरिरहेको घटना कसलाई थाहा छैन होला र । अनि त्यसको अपजस ममाथि थोपर्न मिल्छ ? हुने कुरा हो र यो ? त्यसकारण ती सबै आरोप मैले अस्वीकार गरेँ । यस्तो बेला हुन्थ्यो बढी यातना दिने काम । तैपनि अडान छोडिनँ । बढीभन्दा बढी दबाब अभियुक्तलाई आफंैविरुद्ध बोल्न लगाउने कोसिस राज्यबाट हुँदो रहेछ । जुन उनीहरुकै कानूनविरुद्ध छ । यातनाको तरिका यतिसम्मन कि निजी जीवनसँगै खेलवाड गर्ने किसिमबाट दिइन्थ्यो । जस्तो ‘अहिलेसम्म बिहे किन नगरेको ? अब खेर जाने भइस् के गर्छस् ? अन्तिम इच्छा के छ ? आमालाई भेट्ने इच्छा थियो होला, के गर्नु‘ ? अनि निकृष्ट शब्दमा गालीगालौज ।
त्यस्तै शारीरिक यातनामा घरी पालो त घरी एकैपटक घुँडा र र तीघ्रामाथि चढेर बुटले कुल्चने, हिर्काउने, दुवै गोडा तेस्र्याउन लगाएर पैदललाई मात्र दायाँबायाँ पल्टाएर बुटले किच्ने, लठ्ठीले जोडजोडले प्रहार गर्ने, त्यो खासमा जोर्नीको भागलाई खुस्काउने कोसिस गरे । त्यसबाट ठूलो घाउचोट नदेखिने तर अंगभंग (अपांग) हुनेगरी चलाखीपूर्ण गहिरो यातना दिँदा रहेछन् । केही भइहाल्यो भने बाहिर गएर पत्रकारसम्मेलन गरेर भण्डाफोर गरियो भने जागिर जाने, दण्डित हुनुपर्ने डर पनि अलिअलि देखिन्थ्यो । तर, पाखुरा, मुन्टो बटारिदिने जस्ता क्रुर यातना दिन्थे । सायद राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय रुपमा मानवअधिकार हनन र युद्ध अपराधीबाट जोगिन यस्तो विधि अपनाएको देखिन्छ । बेलाबेलामा यस्तो यातना दिएको कुरा बाहिर गएर भनिस् भने‘‘ पनि भन्थे । चोटका कारण दुइटै खुट्टा र पाखुराका जोर्नीमा समस्या देखिएको छ । राम्ररी चलाउन समेत सकिरहेको छैन, उपचारमै छु ।
० टेकु परिसरमा पुर्याएपछि पनि यातना दिए ?
त्यहाँ पुर्याएपछि यातना रोकियो । त्यहाँ सर पनि हामीसँगै हुनुभएकोले होला । तीनैजनाको अभियोग पनि एउटै थियो । त्यसरी टेकु पुगेपछि साढे १० बजेतिर सामान्य दालभात खाना दियो । खायौं । अघिल्लो दिन दिउँसो कालो चियाबाहेक बिहानको पानी र बिस्कुट मात्र हो खान पाएको । हामी पुगेपछि त्यहाँका हिरासतमा भएका धेरै बन्दीहरुमाझ् हल्लीखल्ली नै भयो । धेरैले सरलाई चिन्दा रहेछन्, हात मिलायौं, धेरैसँग अभिवादन साटासाट भयो । त्यसपछि मध्यान्ह १२ बजेतिर अनसन्धानका लागि भन्दै म्याद थपको लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालत लगियो । अदालतमा हामीलाई चन्दा अभियोगमा गिरफ्तार गरेको भन्दै प्रमाणको रुपमा हाम्रो साथबाट बरामद गरेको भनेर प्रहरीले आफ्नै पाइन्टको गोजीबाट एकाएक पार्टीकै नामको चन्दा रसिद एउटा सिङ्गै प्याड निकालेर न्यायाधीशलाई दियो । यो देखेर हामी छक्क पर्यौं । सरले त्यसको त्यही प्रतिवाद गर्नुभयो । त्यो कुरा न्यायाधीशले बुझे होलान् ।
त्यसपछि टेकु फर्काउने क्रममा केही छिन अदालतबाहिर सरले गिरफ्तारबारे र पार्टीको धारणा मिडियामा बोल्नुभयो । क्षणभरै विषय अन्तर्रा्ष्ट्रियकरण भयो । त्यहाँबाट जनता र मिडिया, मानवअधिकारवादीहरुले हाम्रो बारेमा राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाए । भोलिपल्ट बयानका लागि भन्दै काठमाडौँ जिल्लाको सरकारी वकिलको कार्यालयमा लगियो । दुई दिनमा तीन जनाको बयान सकियो । त्यो बेला चन्दा अभियोगमा नेकपाका लोकेन्द्र दर्नाल ‘प्रमेश’लाई पनि बयानका क्रममा सँगै भेट भयो । उनलाई ललितपुरको सानेपाबाट साउन २६ मा गिरफ्तार गरेको रहेछ । उनलाई पनि चरम यातना दिइएको पाएँ । उनलाई उपचार समेत गराइएको थिएन । उनले त्यो गुनासो न्यायाधीश सामु राखे ।
हामीलाई चाहिं न्यायाधीशको आदेशपछि वीर अस्पतालमा लगेर सामान्य उपचार गराइयो । हामीसँगबाट लगेको सामान भनेको तीनैजनाको आ–आफ्नो मोवाइल, मेरो ल्यापटाप, पर्स (वालेट) र गाडी मात्र हो । तर, अदालतमा ‘चन्दा रसिद’को कुरा पो ल्यायो । कस्तो उदेक लाग्दो स्थिति । बयानमा पनि उल्टोपाल्टो साधेर हैरानी खेलाउने प्रयास भयो । तर, हामीले आफ्नो कुरा राख्यौं । बरु सरकारले कब्जा गरेको मेरो मोवाइल, ल्यापटाप, पर्स (वालेट) अहिलेसम्म दिएको छैन ।
० सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता भएको कुरा थाहा पाउनु भएको थियो ?
० सरकारको व्यवहार हेर्दा कस्तो जस्तो लाग्यो ?
कानूनमा नागरिकलाई गिरफ्तार गर्नु पहिले अभियोगपत्र थमाएर मात्र रिगफ्तार गर्ने अख्तियारी सुरक्षाकर्मीलाई दिइएको छ । तर, यहाँ उल्लंघन भइरहेको छ । सरकार आलोचना सुन्न चाहँदैन । आलोचक पक्षलाई गिरफ्तार गरेर सकेसम्म बेपत्ता पार्ने वा इन्काउन्टर गर्ने तहसम्मको हर्कत अपनाउन सक्छ अब यो सरकारले । नियन्त्रणमा लिइसकेपछि अभियुक्तलाई यातना त के आपूmविरुद्ध बोल्न लगाउन नमिल्ने कानून छ । यो मानवअधिकार घोषणापत्र र संविधानले गरेको व्यवस्था हो । नपत्याए यसबारे सूचना हरेक जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय परिसरमा गएर सूचना हेरे हुन्छ । विश्व मानवअधिकार घोषणापत्र हेरे पुग्छ । सरकारले यो विधिलाई ठाडो कुल्चने काम गरेको छ । नागरिकमाथि पशुलाई गर्ने व्यवहार गरिराखेको छ ।
० यी सब के कारणले गर्दा भयो जस्तो लाग्छ ?
० सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
सफलताको समय सीमा फासीवादी सरकारको रवैया र व्यवहारमा भर पर्ने कुरा हो । उसले जति मात्रामा क्रान्ति र जनताको आन्दोलनमाथि दमन गर्छ त्यही अनुपातमा जनताको सत्ता निकट वा टाढा छ भन्ने देखाउँछ । अहिलेको सरकारको चरित्र र फासीवादी व्यवहारले परिवर्तन टाढा देखिँदैन । पार्टीका दर्जनौं नेता कार्यकर्ता अहिले जेल, हिरासत र यातनामै छन् । उनीहरुमाथि अमानवीय व्यवहार कायमै छ । अधिकार र न्यायको माग गर्दा सरकार टाउको र छातीमा गोली दाग्छ । दिनदाहाडै निर्दोष नागरिकको निर्मम हत्या गर्छ यो सरकार । बालात्कार र महिला हिंसाका घटना रोक्न सरकार असफल भएको छ । कहाँको क्रान्ति रोक्न सक्ने कुरा ? शासकको त्यही दमन, हत्या र अत्याचार देखेरै संसदीय फोहोरी शासन व्यवस्था भत्काएर जनताको राज्यसत्ता स्थापना गराउन विगतमा १० वर्ष जनयुद्ध चलेको थियो । त्यसैको बलमा अढाई सय वर्ष लामो सामन्ती राजतन्त्र समाप्त हुन पुग्यो ।
तर बिडम्वना, त्यो जनयुद्धका नेतृत्व प्रचण्ड र बादलहरु क्रान्तिलाई बीच बाटोमै अलपत्र छाडेर त्यही संसदीय फोहोरी खेलमा चुर्लुम्म डुब्न पुगे । क्षणिक स्वार्थ र पैसामा फसे । जनता अलपत्रमा छन् । त्यसैले अलपत्रमा पारिएको जनता, एजेण्डा र क्रान्तिलाई पूरा गर्न एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत क्रान्ति र परिवर्तनको झण्डा उठाएका हौं । जसको नेतृत्व नेकपाले गरिराखेको छ ।
अहिले देशमा दलाल संसदीय व्यवस्थाका पक्षपाती र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाका पक्षधरबीच भीषण संघर्ष चलिरहेको अवस्था हो । संघर्षमा सरकारबाट दमन, गिरफ्तार र झुठा अभियोगमा जेल पर्नु अस्वभाविक होइन । तर, शासक–प्रशासकबाट दमन र हस्तक्षेप नरोकेको खण्डमा अधिकार प्राप्तिको लागि जनता प्रतिरोध संघर्ष चलाउन बाध्य हुन्छन् र त्यो बेला शासक वर्ग कहाँ पुग्छन् इतिहासले बताउने विषय हो । तर, मेरो कुरा के मात्र हो भने, सरकारले कम्तीमा आफैंले बनाएको नियम कानूनको पालना गरिदिए हुन्थ्यो । नागरिकको राजनीतिक अधिकारमाथि बन्देज नलगाए हुन्थ्यो । विश्व मानवअधिकारको घोषणापत्र पढिदिए हुन्थ्यो भन्ने हो । ‘लोकतान्त्रिक’ चरित्र मात्र देखाइदिए पुग्थ्यो ।
आइत, भदौ १७, २०७५ मा प्रकाशित